Kenya oo in ka badan 50 Askari looga dilay Waqooyi Bari, saddexdii bil ee la soo dhaafay - Saafi Films Production Somali Films Hindi Af Soomaali Musalsal heeso
Kenya oo in ka badan 50 Askari looga dilay Waqooyi Bari, saddexdii bil ee la soo dhaafay
Warbaahinta dalka Kenya ayaa ku waramaysa saddexdii bil ee la soo dhaafay weeraro ka dhacay Gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya in lagu dilay askar gaareyso 50 askari oo ka tirsan ciidamada KDF ee dalka Kenya.
Weerarada ugu badan ee askarta Kenya lagu waxyeelaayay ayaa dhacay Bishan gudaheeda, kadib markii qaraxyo Miinooyin dhulka lagu aaso, ciidamada Kenya lagula eegtay Gobolka Waqooyi Bari.
15-kii Bishan 5 Askari ayaa ku dhintay Garissa kadib markii weerar Xoogag ka tirsanaa Ururka Al Shabaab weerar kadis ah ay ku qaadeen gaari ay la socdeen ciidamada Kenya oo maraayay duleedka Garissa.
11 Askari ayaa ku dhimatay inta u dhaxeysa Mandhera iyo Garissa May 22-25 keedii saddex weerar oo ka dhacay Gobolka waxaana sii kordhaya Weerarrada Al-Shabaab ka gaysanayaan Gobolkaas.
Islii Bishii May 10-askari oo Kenyan ah ayaa ku geeriyooday weerar ka dhacay deegaanka Baure ee dalka Kenya, kana tirsan Gobolka Xeebta Lamu, markii laba weerar oo isxigay Shabaab ay halkaasi ka fuliyeen.
Shalay oo ugu dambeysay deegaanka Dhamase weerar ka dhacay Warbaahinta dalka Kenya waxa ay sheegaysaa in lagu dilay laba askari oo Kenyan ah, halka Shabaabka ay sheegteen in lagu dilay Shan Askari oo Kenyan ah weerarkaasi.
Tani ayaa muujinaysa sida Shabaab ay culeys Militari u saareen Gobolka Waqooyi Bari oo ah meesha ugu badan ee ay ka fuliyaan weerarada Al Shabaab ay gaystaan.
Udugii Jaceylka 37